Iindaba - Ngaba iimaski ziyabakhusela abantu abazinxibileyo okanye abantu ababangqongileyo?
Ngaba iimaski ziyabakhusela abantu abazinxibileyo okanye abantu ababangqongileyo?
"Ndicinga ukuba kukho ubungqina obaneleyo bokuthi eyona nzuzo ingcono yeyabantu abane-COVID-19 ukubakhusela ekunikezeni i-COVID-19 kwabanye abantu, kodwa useza kufumana inzuzo ngokunxiba imaski ukuba awukwenzi." andinayo i-COVID-19, utshilo uChin-Hong.
Iimaski zinokusebenza ngakumbi “njengolawulo lomthombo” kuba zinokuthintela amathontsi amakhulu akhutshiweyo ekubeni abe ngumphunga abe ngamathontsi amancinane anokuhambela kude.
Enye into ekufuneka uyikhumbule, utshilo u-Rutherford, kukuba usenokuyibamba intsholongwane ngeenwebu zamehlo akho, umngcipheko wokuba isigqubuthelo sobuso asiwuphelisi.
Ngaba uhlobo lwemaski lubalulekile?
Uphononongo luthelekise izinto ezahlukeneyo zemaski, kodwa kuluntu ngokubanzi, eyona ngqwalasela ibalulekileyo inokuba yintuthuzelo.Eyona maski ilungileyo yile onokuthi uyinxibe ngokukhululeka nangokungaguquguqukiyo, utshilo uChin-Hong.Ii-N95 respirators ziyimfuneko kuphela kwiimeko zonyango ezifana ne-intubation.Iimaski zotyando zihlala zikhusela ngakumbi kuneemaski zelaphu, kwaye abanye abantu bazifumana zikhaphukhaphu kwaye zikhululekile ngakumbi ukuzinxiba.
Eyona nto iphambili kukuba nayiphi na imaski evala impumlo kunye nomlomo iya kuba luncedo.
"Ingcamango yokunciphisa ingozi kunokuthintela ngokupheleleyo," kusho uChin-Hong.“Awuzilahli izandla zakho ukuba ucinga ukuba imaski ayisebenzi nge-100 pesenti.Bubudenge obo.Akukho mntu uthatha iyeza le-cholesterol ngenxa yokuba baya kuthintela ukuhlaselwa yintliziyo nge-100 ekhulwini lexesha, kodwa unciphisa umngcipheko wakho kakhulu.
Nangona kunjalo, bobabini uRutherford kunye noChin-Hong balumkise ngokuchasene neemaski ze-N95 ezinevalvu (eziqhele ukusetyenziswa ekwakhiweni ukuthintela ukuphefumla uthuli) kuba azibakhuseli abo bakungqongileyo.Ezi zivalo zendlela enye ziyavaleka xa lowo uzinxibileyo ephefumla, kodwa zivuleleke xa lowo uzinxibileyo ephefumla, zivumela umoya ongahluzwanga namathontsi ukuba aphume.UChin-Hong uthe nabani na onxibe imaski enevalvu kuya kufuneka anxibe imaski yotyando okanye ilaphu phezu kwayo."Kungenjalo, nxiba nje imaski engeyiyo ivalve," utshilo.
ISan Francisco ichaze ukuba iimaski ezineevalvu azihambisani nomyalelo wokugquma ubuso besixeko.
Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza - AMP Mobile Imaski yaseTshayina, Pharmacy Surgical Mask, FFP2 Isiphefumlo, Imaski ekhuselayo yaseTshayina, Imaski yePPE, Imaski yobuso,